Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | TV Sport Free
No video ama videos waxaa marti on this site. Mid ka mid ah video aad halkan ka heli kartaa la helay laga yaabaa in lacag la'aan ah goobaha sida Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, iyo kuwo kale oo badan. Fiiro gaar ah ma waxaan ku yabooho ama damaanad adeeg iyo masuul ka ah tallaabo kasta oo ka mid ah user our ee ma aha. Waxaan leenahay iskaashi lahayn oo aadan codsan in ay iskaashi la Milkiilaha mid ka mid ah video ama durdur ee la siiyey website-kayaga. content All waa copyright ee milkiilayaasha ay.
1.1 In kastoo aan sameynay wax kasta oo suurto gal ah in diyaarinta goobta, Annagu waxaannu nahay in aan idinla socodsiiyo in farsamo ahaan wax aan macquul aheyn waa in ay u ordaan oo aan wax unu. warranty No la siin karaa oo ku saabsan howlgalka sii of our website oo aan wax masuuliyad ay dhacdo in ay qaataan ma noqon doonto functional sababtoo ah unu ama dayactirka.
1.2 Waa in aad ay ogaadaan in dhammaan macluumaadka waxaa bixiya labada dhinac saddexaad oo gebi ahaanba aan qiimeeyo shaqadooda. Si kastaba ha ahaatee ma nihin mas'uul macluumaadkan.
1.3 content The on our website raacaysaa sharciga iswiidhishka laakiin waxaan qaadan lahayn deyn wixii aan la raacayo sharciyada maxalliga ah ee khuseeya deegaamada kale.
2. Links iyo ka Website
2.1 Website-kani waxaa laga yaabaa in ay xiriir la xiraysid in goobaha ay maamulaan labada dhinac saddexaad. Waxaan nahay in aan idinla socodsiiyo in aan jirin gacanta wax ka websites sida oo masuul ka ah macluumaadka la siiyey iyaga on yihiin ma.
3. Isticmaalka macluumaad
3.1 Ma nihin milkiilayaasha of macluumaad kasta oo la siiyey website-ka. Sayidka, waxaan mas'uul ka ah waxa aad sameyn waxaa la mid ma aha. Waxaad u qaybi kartaa macluumaad haddii milkiilayaasha ay asalka waxba ka dhanka ah leeyihiin.
Share la saaxiibo
© copyright 2015 freesport-tv.com | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah